Nhau - Mhando uye mashandiro emabhodhoro egirazi
Mabhodhoro egirazi anonyanya kushandiswa kurongedza zvigadzirwa mune chikafu, waini, chinwiwa, mishonga uye mamwe maindasitiri. Mabhodhoro egirazi uye magaba ane hutano hwakanaka hwemakemikari uye haatapurirane nechomukati. Iwo akachengeteka kushandisa nekuda kwemhepo kuomarara uye kwakanyanya kupisa tembiricha. yakavimbika. Girazi bhodhoro renyika yangu chinwiwa kurongedza mudziyo, girazi zvakare rudzi rwekuputira zvinhu zvine nhoroondo refu. Nemidziyo mizhinji yekupakata ichidira mumusika, midziyo yegirazi ichiri kutora chinzvimbo chakakosha mune yekumwa chinwiwa, icho chisingapatsanurike kubva pamapakeji ayo ayo zvimwe zvekutakurisa zvinhu zvisingakwanise kutsiva.
Mumakore achangopfuura, kudiwa kwepamba kwemabhodhoro egirazi uye magaba kwakaramba kuchikura, asi izvo zvinodikanwa zvehunhu hwechigadzirwa (Hunhu) uye huwandu (Hwakanaka) hwavewo hwakakwira zvakanyanya. Isu takagadziridza chimiro chemabhodhoro egirazi uye magaba ekuchinjika kune akasiyana Neakasiyana zvigadzirwa kurongedza, giredhi yechigadzirwa uye kuwedzerwa kukosha zvakagadziridzwa, chikamu chemusika chakawedzerwa, uye kukwikwidza kweindasitiri yangu yegirazi bhodhoro indasitiri mumusika wese yakagadziridzwa.
Kune akawanda marudzi emabhodhoro egirazi uye magaba, akaiswa mukati kutenderera, oval, mativi, akaenzana, uye akapfava zvinoenderana nemaumbirwo avo. Pakati pavo, mazhinji akatenderera. Zvinoenderana nesaizi yemuromo wemabhodhoro, pane mukanwa wakakura, mukanwa mudiki wekumwaya muromo, nezvimwe, zvinoenderana nenzira yekuumba, pane mabhodhoro akaumbwa uye mabhodhoro ekudzora. Zvinoenderana nekupatsanurwa kwemavara, pane asina mavara uye ane mavara. Kurongwa kuri pamusoro hakusi kuomarara. Dzimwe nguva mhando imwechete yebhodhoro inogona kuiswa mumhando dzinoverengeka, uye zvinoenderana nekuvandudzwa kwebasa uye kushandiswa kwemabhodhoro egirazi nemakani, akasiyana anowedzera zuva nezuva.
Iko kurongedza kwemishonga yemabhodhoro egirazi kunoenderana zvakanyanya nemabhodhoro egirazi ekurapa. Iko kune kazhinji mhando mbiri dzekutakura dzemishonga yemabhodhoro egirazi. Imwe yakajairwa kurongedza mumakoroni makatoni, uye imwe kupisa kupisa PVC kana PE firimu. Shrink kurongedza, uye shoma shoma pallet kurongedza. Girazi bhodhoro renyika yangu chinwiwa kurongedza mudziyo, girazi zvakare rudzi rwekuputira zvinhu zvine nhoroondo refu. Nemidziyo mizhinji yekupakata ichidira mumusika, midziyo yegirazi ichiri kutora chinzvimbo chakakosha mune yekumwa chinwiwa, icho chisingapatsanurike kubva pamapakeji ayo ayo zvimwe zvekutakurisa zvinhu zvisingakwanise kutsiva. Kubva pakuona kwekuchengetedzwa kwechigadzirwa uye zvinodikanwa zvehutsanana, mhando yekupisa yekudzora kurongedza uye kurongedza kwepallet kwakakwirira zvakanyanya kupfuura zvakajairwa katoni kurongedza. Ikozvino yakagadziridzwa kuita PE firimu iri kupisa-kwakadzikira uye kuiswa mukatoni, iyo yakachena uye ine hutsanana, uye inogona kupakurwa seisina chena (fungus). Uku ndiko zvakare kutungamira kwekusimudzira kwehutachiona hwemabhodhoro egirazi.
Izvo zvakaomarara zvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinoita kuti kumanikidzwa kwemabhodhoro egirazi akanyanya. Mabhodhoro egirazi, vagadziri vemabhodhoro ane girazi, uye zvigadzirwa zvegirazi zvine ruzivo mukugadzirwa uye kutengeswa kwemabhodhoro egirazi akasiyana siyana (Kutengesa) Nekuti mabhodhoro egirazi uye magaba zviri pachena uye zvine makemikari akagadzika (Tsananguro: yakatsiga uye yakagadzikana; Hapana shanduko) Kuita kwakanaka, mutengo wakaderera , kutaridzika kwakanaka, kugadzirwa nyore (Kugadzira) kugadzira, kunogona kudzokororwa kakati wandei, nezvimwewo, saka kunyangwe paine kukwikwidza kwezvimwe zvinhu zvekurongedza (makwikwi), vagadziri vemabhodhoro egirazi vachine zvimwe zvakanakira Hunhu hwekuputira zvinhu haugone kutsiva. Girazi bhodhoro renyika yangu chinwiwa kurongedza mudziyo, girazi zvakare rudzi rwekuputira zvinhu zvine nhoroondo refu. Nemidziyo mizhinji yekupakata ichidira mumusika, midziyo yegirazi ichiri kutora chinzvimbo chakakosha mune yekumwa chinwiwa, icho chisingapatsanurike kubva pamapakeji ayo ayo zvimwe zvekutakurisa zvinhu zvisingakwanise kutsiva.
Mumakore achangopfuura, nekuwedzera kuri kudiwa kwevatengi kwekugadziriswa kwakadzama kwegirazi mabhodhoro ekuputira zvigadzirwa (Chigadzirwa), silika yekudhinda screen uye kubheka maruva pamusoro pemidziyo yegirazi zvave zvakajairika, uye nehunhu uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinodiwa zvesilika kudhinda, pad yekudhinda inks uye pendi kumba uye kunze kwenyika Zvichiwedzera kuomarara, isa kumanikidza kwakawanda kune mazhinji magirazi emabhodhoro emakambani ekugadzirisa.
Buddhism yakaunzwa kuChina kubva kuHan Dynasty, uye yakatanga uye ikabudirira panguva yeWei neJin Dynasties. Ndarama, sirivheri, amber, makorari, mabwe ematombo, mavara emagetsi, uye agate zvakanyorwa sePfuma Nomwe dzeBuddhism. Pamusoro pezvo, baba vaCao Cao nemwanakomana wavo vaitsigira kuvigwa kwakaonda, senge kufa kwaCa Cao kufa-kufa, "kusangana nenguva, kwete goridhe nejade pfuma", kuitira kuti burial jade system iyo yakaumbwa muHan Dynasty kweanopfuura Makore mazana mana akafa, uye maparera asina kufukurwa nezvimwe zvinhu zvakadonha zvakanyanya. Hombodo dzegirazi dzinoonekera dzaishandiswa kupfekedza zvisaririra sezvipiriso zveBuddhist, uye huwandu hwakawanda hwegirazi magirazi akagadzirwa kushongedza zvifananidzo zveBuddha netembere, izvo kune imwe nhanho zvairatidza kukura kwehunyanzvi hwegirazi panguva iyoyo.